November 2017 – Dhammadīpa
Posted on 18 Nov 2017 by Ashin Sopāka
“The fleshly eye, the divine eye,
“The arising of the fleshly eye
One is released from all suffering.” – It 61
Yato ñāṇaṁ udapādi,
Yassa cakkhussa paṭilābhā,
”မံသစက္ခု ဒိဗ္ဗစက္ခုနှင့် အတုမရှိသော ပညာစက္ခုဟူကုန်သော စက္ခုသုံးပါးတို့ကို ယောကျာ်းမြတ်ဖြစ်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောကြားတော်မူ၏။
မံသစက္ခု၏ ဖြစ်ခြင်းသည် ဒိဗ္ဗစက္ခု၏ အကြောင်းတည်း။ အကြင်အခါ အတု မရှိသော ပညာစက္ခုဟူသော အာသဝက္ခယဉာဏ်သည် ထင်ရှားဖြစ်၏။ ထိုအခါ ယင်းပညာစက္ခုဟူသော အာသဝက္ခယဉာဏ်ကို ရခြင်းကြောင့် ဆင်းရဲအားလုံးမှ ကင်းလွတ်၏”
Common Myna ©Ashin Sopāka 2017
Posted in Dhamma	| Tagged dhamma, knowledge, wisdom
Posted on4Nov 2017 by Ashin Sopāka
“Bhikkhus, it is good forabhikkhu from time to time to review his own failings. It is good for him from time to time to review the failings of others. It is good for him from time to time to review his own achievements. It is good for him from time to time to review the achievements of others.” – An 8.7
“Sādhu, bhikkhave, bhikkhu kālena kālaṁ attavipattiṁ paccavekkhitā hoti. Sādhu, bhikkhave, bhikkhu kālena kālaṁ paravipattiṁ paccavekkhitā hoti. Sādhu, bhikkhave, bhikkhu kālena kālaṁ attasampattiṁ paccavekkhitā hoti. Sādhu, bhikkhave, bhikkhu kālena kālaṁ parasampattiṁ paccavekkhitā hoti.”
“ရဟန်းတို့ ရဟန်းသည် ရံဖန်ရံခါ မိမိ၏ ပျက်စီးမှုကို ဆင်ခြင်မူ ကောင်း၏၊ ရဟန်းတို့ ရဟန်းသည် ရံဖန်ရံခါ သူတစ်ပါး၏ ပျက်စီးမှုကို ဆင်ခြင်မူ ကောင်း၏၊ ရဟန်းတို့ ရဟန်း သည် ရံဖန်ရံခါ မိမိ၏ ပြည့်စုံမှုကို ဆင်ခြင်မူ ကောင်း၏၊ ရဟန်းတို့ ရဟန်းသည် ရံဖန်ရံခါ သူတစ်ပါး၏ ပြည့်စုံမှုကို ဆင်ခြင်မူ ကောင်း၏။”
“Lành thay, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thường thường quan sát sự vi phạm của mình. Lành thay, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thường thường quan sát sự vi phạm của người khác. Lành thay, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thường thường quan sát sự chứng đạt của mình. Lành thay, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thường thường quan sát sự chứng đạt của người khác.”
Purple Backed Starling (aka Daurian) ©Ashin Sopāka 2017
Posted in Dhamma	| Tagged dhamma, reflection